Adobe Illustrator CS2 नि:शुल्क डाउनलोड लिङ्कहरू
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > Adobe Illustrator CS2 नि:शुल्क डाउनलोड
द्वारा Ann Young, Naveen Pokhrel 2022-05-10, Nepali Blog
Adobe Illustrator CS2 नि:शुल्क डाउनलोड लिङ्क प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ तर सबै प्रस्तावहरू साँच्चै शंकास्पद देखिन्छन्? यो लेख पढ्नुहोस् र Adobe Illustrator CS2 को कानुनी संस्करण कसरी प्राप्त गर्ने भनेर जान्नुहोस् जसले ब्यानरहरू, व्यापार कार्डहरू, र वेबसाइट डिजाइनहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
Adobe Illustrator CS2 लाभहरू
Adobe Bridge दृश्य ब्राउजर
समोच्चको सम्बन्धमा किनारा रेखाको स्थिति निर्धारण गर्दै
मोबाइल ग्याजेटहरूको लागि ग्राफिक्स सिर्जना गर्दै
ग्रेस्केल छविहरू सिर्जना गर्दै
PDF/X मानक समर्थन
काम गर्ने वातावरण आदेश दिए
Adobe Illustrator CS2 के हो?
Adobe Illustrator CS2 एक भेक्टर ग्राफिक्स सफ्टवेयर हो जुन डिजाइनरहरूले डिजिटल ग्राफिक्स, चित्रण र मुद्रण जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्छन्। यो कुनै पनि प्रकारको मल्टिमिडिया स्रोतहरू, मुद्रण सामग्री, इन्टरनेट-सामग्री, अन्तरक्रियात्मक उपकरणहरू, भिडियो क्लिपहरू र मोबाइल एपहरू विकास गर्न एक सुविधाजनक उपकरण हो।
के आधिकारिक Adobe Illustrator CS2 संस्करण डाउनलोड गर्न सम्भव छ?
दुर्भाग्यवश, यो संस्करण अब उपलब्ध छैन। विकासकर्ताहरूले धेरै पहिले वेबसाइटबाट यो संस्करण मेटाए किनभने यसको कार्यक्षमता धेरै पुरानो छ र ग्राफिक डिजाइनरहरूको आधुनिक आवश्यकताहरूसँग मेल खाँदैन। यद्यपि, Illustrator को नवीनतम संस्करण डाउनलोडको लागि उपलब्ध छ।
Adobe Illustrator को लागत कति छ?
को लागि मासिक भुक्तानी Adobe Illustrator तपाईंले रोज्नु भएको सदस्यता योजनाको आधारमा $20.99 देखि $52.99 सम्म फरक हुन्छ। यसबाहेक, Adobe कम्पनीले प्रस्ताव गर्दछ Adobe Creative Cloud छुट यसले तपाईंलाई केही पैसा बचत गर्न र पर्याप्त छुटको साथ इजाजतपत्र प्राप्त संस्करण किन्न मद्दत गर्नेछ।
त्यहाँ नि: शुल्क संस्करण छ र म यसलाई कति समयसम्म प्रयोग गर्न सक्छु?
तपाईंले खरिद गर्नु अघि परीक्षण गर्न7दिनको लागि नि: शुल्क परीक्षण संस्करण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, तपाईंले Illustrator मा उपलब्ध सबै प्रकार्यहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
के Adobe Illustrator एड-अनहरूलाई समर्थन गर्दछ?
तुलना गर्दै इलस्ट्रेटर बनाम फोटोशप, मैले पत्ता लगाएँ कि दुबै प्रोग्रामहरूले अतिरिक्त व्यावसायिक ब्रशहरू, फन्टहरू र प्लग-इनहरू स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ Adobe Illustrator आइकनहरू वेबसाइट डिजाइन मा काम गर्न।
Adobe Illustrator CS2 नि:शुल्क प्रयोग गर्ने अर्को तरिका
यो कार्यक्रम प्राप्त गर्ने दुई तरिकाहरू छन् - यसलाई एकल एप वा क्रिएटिभ क्लाउडको भागको रूपमा डाउनलोड गर्न।
नि: शुल्क ट्यूटोरियलहरू
सबै Adobe कार्यक्रमहरू प्रयोग गर्ने सम्भावना
सदस्यता छनोट गर्दा, तपाईंले सबैभन्दा रचनात्मक विचारहरू जीवनमा ल्याउन Adobe कम्पनी द्वारा विकसित सबै कार्यक्रमहरू प्रयोग गर्ने सम्भावना पाउनुहुन्छ। यसबाहेक, तपाईंले 100GB को मात्रामा क्लाउड भण्डारणमा पहुँच पाउनुहुनेछ, आफ्नै एडोब पोर्टफोलियो, प्रिमियम फन्टहरू र Illustrator कसरी मास्टर गर्ने भन्ने बारे अनलाइन पाठहरू।
बारे थप जान्नुहोस् Adobe Creative Cloud नि: शुल्क परीक्षण।
Adobe Illustrator CS2 पायरेटेड संस्करण
धेरै प्रयोगकर्ताहरू प्राय: खोज्न थाल्छन् Adobe Illustrator क्र्याक वा एडोब इलस्ट्रेटर टोरेन्ट सदस्यताको लागि तिर्न छैन। तपाईं पनि भेट्न सक्नुहुन्छ Adobe Illustrator keygen, जुन अहिले ह्याक गरिएका संस्करणहरूको लागि सुरक्षित विकल्प मानिन्छ। तर यस्ता फाईलहरू स्थापना गर्ने जोखिम नलिनु राम्रो हुन्छ र तिनीहरूको प्रयोगसँग सम्बन्धित सबै नकारात्मक नतिजाहरू बारे जान्नुहोस्।
यदि तपाइँ ह्याक गरिएको संस्करणहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ एक अपराधी बन्नुहुनेछ। त्यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रतिलिपि अधिकार को रक्षा गर्ने र समुद्री डाकू सफ्टवेयर विरुद्ध लड्न को लागी धेरै कानूनहरु छन्। सजायको रूपमा, तपाईंले $ 1000 बाट सुरु हुने जरिवाना तिर्नुपर्नेछ वा कम्तिमा3वर्षको लागि जेल जान सक्छ।
ह्याक गरिएका प्रोग्रामहरू स्थापना गर्दा, तपाईंले स्थापना गाइडमा "एन्टिभाइरस असक्षम" गर्न सिफारिस देख्न सक्नुहुन्छ। यो हुन्छ किनभने प्रणालीले फाइललाई अवैध रूपमा पत्ता लगाउँदछ र किनभने यसले भाइरसहरू समावेश गर्दछ। यस्तो तरिकामा, पाइरेट Adobe CS2 फ्री संस्करण स्थापना गर्दा, तपाइँ तपाइँको प्रणाली मा मालवेयर संग संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ जसले तपाइँको क्रेडिट कार्ड डाटा वा व्यक्तिगत जानकारी चोर्नेछ।
तपाइँको पीसी को सुरक्षा को लागी, म प्रयोग गर्न को लागी सिफारिस गर्दछु उत्तम नि: शुल्क एन्टिभाइरस सफ्टवेयर।
कुनै प्राविधिक समर्थन छैन। झोला र लग्स
ह्याक गरिएका प्रोग्रामहरू स्थापना गर्दा, तपाईंले कुनै पनि अद्यावधिकहरू र प्राविधिक समर्थन प्राप्त गर्नुहुने छैन जसले तपाईंलाई कुनै समस्या आएमा मद्दत गर्नेछ। यस्ता कठिनाइहरू लगभग सबै अवस्थामा उत्पन्न हुन्छन्। उदाहरण को लागी, एक कार्यक्रम को अचानक बन्द, धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरु को अनुपस्थिति, फाइलहरु आयात गर्न असम्भव, आदि।
Adobe Illustrator CS2 विकल्पहरू
ह्याक गरिएको Adobe Illustrator CS2 नि:शुल्क डाउनलोड लिङ्कहरू खोज्नुको सट्टा, गुणात्मक र व्यावसायिक कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्ने नि:शुल्क विकल्पहरूसँग परिचित हुनुहोस्।
धेरै उपयोगी उपकरणहरू
उत्कृष्ट ढाँचा समर्थन
ओभरलोड गरिएको इन्टरफेस
Inkscape Adobe Illustrator को लागि उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक हो। यसले समान प्रकार्यहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै स्केचिङ, चित्रण, र सम्पादन उपकरणहरू। यसबाहेक, यसमा स्क्रिन पिक्सेल, बिटम्याप ट्रेसिङ, वस्तुहरूमा रङ पेन्टिङ, र ह्यान्डलहरूद्वारा ढाँचाहरू सम्पादन गर्ने कुञ्जीहरू छन्।
Inkscape वेब डिजाइन मा संलग्न पेशेवर वा अर्ध-व्यावसायिक विशेषज्ञहरु को लागी एक उपकरण हो। यो एक खुला स्रोत कार्यक्रम हो त्यसैले तपाईंले स्रोत कोड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई अन्य सफ्टवेयरमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ।
Inkscape प्रयोग गरेर, तपाईंले SVG, PDF, जस्ता विभिन्न ढाँचाहरू खोल्न र आयात गर्न सक्नुहुन्छ। EPS, AI र CDR। यसले Windows, Mac र Linux मा सहज रूपमा काम गर्दछ। केवल कमजोरी यो कार्यक्रम कहिलेकाहीं ढिलो हुन सक्छ।
थप सिक Adobe Illustrator विकल्पहरू।
भेक्टर सम्पत्तिहरूको ठूलो पुस्तकालय
तुलनात्मक रूपमा सीमित कार्यक्षमता
यो कार्यक्रमले तपाईंलाई आधारभूत भेक्टर-सम्पादन उपकरणहरू जस्तै पेन, लाइन, नाइफ, स्लाइस, बेजिगन, ग्रेडियन्ट सम्पादकसँग खुशी पार्न सक्छ। थप रूपमा, यसले केही परिष्कृत सुविधाहरू पनि प्रदान गर्दछ, जस्तै बुलियन विकल्पहरू, प्रतीकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय पाठ समर्थन, आदि।
Gravit एक सहज UI सुविधा छ जुन नेभिगेट गर्न धेरै सरल छ। साथै, त्यहाँ धेरै जानकारीमूलक भिडियो ट्यूटोरियलहरू छन्। यो सफ्टवेयर ब्राउजरमा काम गर्दछ, त्यसैले तपाइँ यसलाई जहाँसुकै नेटमा जडान गर्न सक्नुहुन्छ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यसले विभिन्न ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ, जस्तै PDF, PNG, JPG, SVG, र स्केचले यसलाई Illustrator भन्दा अझ लचिलो बनाउँछ।
अरु धेरै खोज्नुहोस् नि: शुल्क ग्राफिक डिजाइन सफ्टवेयर।
धेरै व्यावसायिक उपकरणहरू
कमजोर पीसी को लागी अनुकूलित छैन
स्केच रचनात्मक प्रयोगकर्ताहरूको लागि विकास गरिएको भेक्टर रेखाचित्रको लागि एक व्यावसायिक कार्यक्रम सफ्टवेयर हो।
सरल र सुविधाजनक इन्टरफेसको लागि धन्यबाद, स्केचले Illustrator र Photoshop सँग मिल्दोजुल्दो धेरै प्रकार्यहरू सुविधा दिन्छ, जसमा तहहरू, ढाँचाहरू, रङ प्यालेट र शैलीहरूसँग काम गर्दछ।
स्केचले उत्कृष्ट भेक्टर ग्राफिक्स सम्पादन क्षमताहरूको गर्व गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले दाबी गर्छन् कि यो प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ र यसले शक्तिशाली संगठनात्मक/ब्रेडक्रम्ब सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, स्केचले शैक्षिक स्रोतहरूको पूर्ण सेट प्रदान गर्दछ।
को बारेमा थप जान्नुहोस् उत्तम नि: शुल्क रेखाचित्र सफ्टवेयर।
तपाईंले कुन प्रोग्राम स्थापना गर्नुभयो भन्ने कुरामा फरक पर्दैन, म दृष्टान्तहरू सिर्जना गर्ने प्रक्रियालाई छिटो र थप गुणात्मक बनाउन यी नि:शुल्क उपकरणहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छु।
तपाईंले धेरै फोटोग्राफी वा चित्रण विधाहरूमा यो धुवाँ ब्रश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ओभरबोर्डमा जानु हुँदैन। धुवाँ बायाँ बाट हल्का स्ट्रोक संग सर्दैछ।
यो उज्ज्वल प्लेड संरचना विभिन्न दृष्टान्तहरूको लागि उपयुक्त छ तर मलाई लाग्छ कि यो ब्यानर र निमन्त्रणाहरूको लागि आदर्श हो।
यो फन्टले कुनै पनि चित्रण वा फोटोमा ग्रन्ज प्रभाव सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ। यस्तो प्रभाव सम्भव छ किनभने अक्षरहरू पातलो र असमान स्ट्रोकहरूसँग पूरक छन्।
Win / Mac को लागि Adobe Illustrator नि:शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्
तपाइँको PC को लागी कानूनी र गुणात्मक कार्यक्रम प्राप्त गर्न को लागी Adobe Illustrator CS2 नि: शुल्क डाउनलोड लिङ्क प्रयोग गर्नुहोस्। तपाइँ तपाइँको अनुभव को बारे मा चिन्ता नगर्न सक्नु हुन्छ किनकी कार्यक्रम शुरुवात र पेशेवरहरु को लागी दुबै उपयुक्त छ।
नि:शुल्क Adobe Illustrator CS2